Raiso ny sary infografika an'ny Affinity Photo sy Designer hitsin-dàlana | Famoronana an-tserasera
Misintona sy manonta hitsin-dàlana fitadiavana sary sy sary pirinty an'ny Affinity Photo
Nanana fotoana vitsivitsy lasa izay isika hitsin-dàlana fitendry rehetra ho an'ny programa Adobe Creative Cloud rehetra. Miaraka amin'izy ireo, toy ny amin'ireo fandaharana Affinity, ianao dia ho afaka manararaotra tsara kokoa ny fotoana rehetra anananao amin'ny andro famolavolana na asa.
Tonga ny fandaharam-piraisana mijanona ary alao safidy tena izy, Ka raha manana ny iray amin'izy ireo ianao na ny beta amin'ny kinova taloha, ity andian-tsary ity dia hahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ireo Affinity Photo na Affinity Designer.
Avelao ny hitsin-dàlana fitendry manao hetsika haingana dia haingana raha manana fahaiza-manao ampy isika manambatra maromaro. Ary ao anatin'ny segondra vitsy dia azontsika atao ny mandika, mametaka, mifindra amin'ny rakitra hafa, mampitombo ny opacity ary mampihatra sivana imbetsaka, hamaranana hetsika voarakitra sy ampiharina amin'ny iray amin'ireo F1, F2 na mihoatra ny lakile.
Ity dia ny sary famantarana hitsin-dàlana Affinity Designer, un programa izay efa noresahintsika tamin'izany fotoana izany. Azonao atao ny misintona ny PDF ho an'ny hitsin-dàlan'ny keyboard Designer amin'ny macOS como el ao amin'ny Windows.
Izao no fotoana tokony Hitsin-dàlana fitendry sary Affinity Photo, ny programa izay nanjary tena fanoloana adobe photoshop, iray izay nohavaozina miaraka amin'ireo vaovao rehetra ireo. Azonao atao koa ny misintona ny PDF ho an'ny hitsin-dàlana fitendry ho an'ny sary roa ao amin'ny Windows como el amin'ny macOS.
Manantena izahay fa izao manomboka mitadidy tsianjery ny hitsin-dàlana tsirairay avy ianao fitendry ho an'ny Affinity Photo sy Affinity Designer, programa roa hisolo ny Photoshop sy Illustrator ary efa mijinja ny valisoany.
Manoro hevitra an'izany izahay pirinty ireo rakitra PDF ireo Raha tsy te hanana ny sary alaina fotsiny ianao mba hahafahanao manana azy ireo eo akaikin'ny klavinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Misintona sy manonta hitsin-dàlana fitadiavana sary sy sary pirinty an'ny Affinity Photo
Torohevitra momba ny fanaingoana sary famantarana
Takelaka sary tsara indrindra